अक्सन शेयर (शेयर लिलामी) भनेको के हो ? कसरी आवेदन दिने ? - Share Gyan
अक्सन शेयर (शेयर लिलामी) भनेको के हो ? कसरी आवेदन दिने ?
शेयर ज्ञान — August 24, 2021 add comment
के हो अक्सन शेयर ?
अक्सन शेयर (Auction Share) लाई नेपालिमा शेयर लिलामी भनिन्छ। लिलामीमा कुनै पनि सामान खरिदकर्ताहरुले बोलकबोल गरेर जसले धेरै मुल्य तिर्छ उसैले सो सामान पाउने हुन्छ। साधारणतय हामीले खेलाडीहरु र कुनै अमुल्य चिजहरुलाई लिलामीबाट किनबेच गरेको देख्दै आएका छौं।
शेयर लिलामी पनि उस्तै हो जहाँ लगानीकर्ताले शेयर पाउनको लागि मुल्य बोलकबोल गर्न पाउँछन। एउटा मुख्य फरक भनेको खेलाडीहरुको या अन्य सामानहरुको बोलकबोल गर्दा सबैलाई मूल्य थाहा हुन्छ भने अक्सन शेयरमा गरिएको बोलकबोल अर्थात बिड सम्बन्धित बिक्रि प्रवन्धक बाहेक अरुलाई थाहा हुँदैन। लगानीकर्ताले शिलबन्दीमा तोकेको मूल्यको आधारमा जसले धेरै मूल्य बोलकबोल गरेको छ उसैले शेयर पाउँदछ भने अरु कम मुल्य बोलकबोल गर्नेले शेयर पाउँदैनन्।
अक्सन शेयरमा अगाडी नै न्युनतम खरिद गर्नुपर्ने कित्ता र तिर्नुपर्ने मूल्य तोकिएको हुन्छ। सो न्युनतम मूल्य र कित्ता भन्दा कम बोलकबोल गर्नेलगानीकर्ताहरुको आवेदन स्वत रद्द हुन्छ। उच्च मूल्य तिर्नेबाट क्रमशः त्यसपछिको थोरै मूल्य गर्दै अक्सनको शेयर छुट्टाउँदै जाने गरिन्छ। यसरी छुट्याउँदै जाँदा जुन मूल्यमा पुग्दा बिक्री गरिने सम्पूर्ण कित्ता शेयर सकिन्छ, त्यहीँ नै बिक्री मूल्य अर्थात कटअफ (Cut-off) हुन्छ जसलाई हामी कटअफ मूल्य भन्छौं । कटअफ मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आवेदन गरेको सम्पूर्ण आवेदकरुले शेयर पाउँदैनन।
कुन कुन अवस्थामा शेयर अक्सनमा आउँछ ?
मुख्य गरि नेपालको संदर्वमा3वटा अवस्थामा शेयर अक्सनमा आउने गरेको छ।
हकप्रदमा पूर्ण रुपमा बिक्री नभएको शेयर
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जफत गरेको शेयर
सामुहिक लगानी कोष (म्युच्युअल फण्ड) ले बेच्न चाहेको तर बिक्री नभएको शेयर
1. संस्थापक शेयर
कुनै पनि कम्पनीको संस्थापक शेयर अरु कुनै संस्थाले होल्ड गरेको छ भने सो शेयर सर्वसाधारणलाई बेच्नु पर्दा अक्सन मार्फत बेच्नु पर्दछ। नेपाली बजारमा अक्सन शेयर हरुमध्ये धेरै भन्दा धेरै संस्थापक शेयर नै अक्सनमा आउने गरेको छ।
2. हकप्रदमा पूर्ण रुपमा बिक्री नभएको शेयर
अर्को भनेको कम्पनीले जारी गरेको हकप्रद शेयर कुनै कारणबश पूर्ण रुपमा नबिकेको अवस्थामा बाँकी रहेको शेयर अक्सन मार्फत अन्य सर्वासाधारणलाई बिक्रि गरिन्छ। हकप्रद शेयर भन्नाले पहिले नै सम्बन्धित कम्पनीको शेयर होल्ड गरेका वा बुक क्लोज मिति भन्दा कम्तिमा एक दिन अगाडी उक्त कम्पनीको शेयर किन्ने लगानीकर्ताहरुको पहिलो हक हुने गरि जारी गरिएको शेयरलाई बुझिन्छ।
हकप्रद शेयर पूर्ण रुपमा नबिक्ने कारणहरु
उक्त कम्पनीको शेयरहोल्डरहरु हकप्रद शेयरबारे सुसुचित नहुनु ।
सुसुचित भएर पनि कम्पनीको प्रगति नदेखेर खासै किन्ने चासो नहुनु ।
कुनै कारण बस आवेदन रद्द हुनु ।
3. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जफत गरेको शेयर
हामीलाई थाह छ कि शेयर लाई धितो राखेर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था बाट ऋण लिन सकिन्छ।
धितो राखिएको शेयर Mero Share>My Shares भित्र “Pledge Shares” मा गएर बस्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको उक्त ऋण ऋणीले समयमा चुक्ता नगरेमा धितोमा राखिएको शेयर बैंकले जफत गर्छ। उक्त शेयरदोस्रो बजारमा सर्वसाधारणलाई बिक्रि गर्नु परेमा अक्सन मार्फत बिक्रि गर्नु पर्ने हुन्छ। नेपालको संदर्वमा जफत गरिएको शेयर कमै मात्र अक्सनमा आउने गरेको छ।
४. सामुहिक लगानी कोष (म्युच्युअल फण्ड) ले बेच्न चाहेको तर बिक्री नभएको शेयर
म्युच्युअल फण्डले किनेको शेयर परिपक्क भैसके पछि बबिक्री गरेर युनिट होल्डरहरुलाई रिटर्न दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि सम्पूर्ण शेयर साधारण कारोबार बाट बिक्री नभएमा पनि अक्सन मार्फत बिक्री गरिन्छ। यो प्राक्टिस भने नेपालमा कम भएको पाईन्छ।
कसरी आवेदन दिन सकिन्छ ?
सबै भन्दा अगाडि अक्सन शेयरबारे आव्ह्वान पत्र राम्रो संग अध्यान गर्नुहोस। आव्ह्वान पत्रमा कुल निष्काशन कित्ता, खुल्ने मिति, तिर्नुपर्ने न्युनतम मूल्य, न्युनतम कित्ता, संस्थापक होकी साधारण शेयर सो बारे जानकारी, पैसा जम्मा गर्ने बैंकको जानकारी लगायतको सम्पूर्ण जानकारी दिईएको हुन्छ।
अक्सन शेयरमा आवेदन दिनको लागि सम्बन्धित कम्पनिले तोकेको बिक्रि प्रबन्धकको अफिसमा पुगेर फारम भरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। उक्त फारम बिक्रि प्रबन्धकको आधिकारिक वेवसाइटबाट वा तोकिएको शाखा कार्यालयबाट लिन सकिन्छ। उक्त फारमको रु. 100 तिर्नुपर्दछ।
फारममा सोधिए अनुसार BOID, किन्न चाहेको शेयरको कित्ता, कबोल गरेको मूल्य (अंक र अक्षरमा ), आफ्नो सम्पूर्ण जानकारी, बैंकको जानकारी भरेर शिलबन्दी गरेर बिक्रि प्रवन्धकको कार्यालयमा बुझाउने।
खरिद मूल्य बराबरको रकम तोकिएको बैंक खातामा ConnectIPS, बैंक ट्रान्सफर गर्ने वा आवेदन सहित फारण Good For Payment चेकलाई शिलबन्दी भित्र राखेर बुझाउने।
Good For Payment बनाउनु परेमा सम्बन्धित बैंकमा गएर बनाउनु पर्ने हुन्छ।
तपाइँले शेयर पाउनु भयो वा भएन भन्ने कुरा सम्बन्धित बिक्रि प्रवन्धकको वेवसाइटमा दिईन्छ वा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिन्छ।
शेयर पाउनु भयो र बाँडफाँड भैसके पछि तपाईको डिम्याट खातामा शेयर आउछ जुन नर्मल तरिकाले किन बेच गर्न सक्नु हुन्छ।
यदि दुई अथवा बढी लगानीकर्ताले एउटै मूल्यको बोली लगाएको खण्डमा मिलाएर शेयर बाँडफाँट गरिन्छ । शेयर नपरेका लगानीकर्ताहरुलाई सात दिनभित्र रकम फिर्ता गरिन्छ ।
कुनै पनि अक्सन शेयरमा आवेदन दिनु भन्दा अगाडि राम्रो संग कम्पनीको बारेमा अध्यान गर्ने। सकिन्छ भने प्राविधिक विश्लेषण होइन भने पनि कम्तिमा कम्पनीको आधारभूत विशलेषण जस्तै पछिल्लो केहि वर्षको नाफा, रिजर्भ, ईपिएस, पीई रेसियो, अधिकतम र न्युनतम मूल्य इत्यधि अध्यान गर्ने।
हकप्रद शेयरजारी गरेर पूर्ण रुपमा बिक्रि नभएको अक्सन शेयरको सवालमा किन पूर्ण रुपमा बिक्रि भएन त्यो बुझ्ने। सायद कम्पनीको अवस्था नराम्रो भएर बिक्रि नभएको पो हो कि। यस्ता कुराको राम्रो जानकारी राख्ने।
आव्ह्वान पत्र राम्रो संग हेर्ने। त्यहाँ दिईएको न्युनतम मूल्य, आवेदन दिनुपर्ने न्युनतम कित्ता, आदि इत्यधि बुझेर राम्रोसंग फारम भर्ने। सानो सानो गल्तीले तपाइँको आवेदन रद्द हुन सक्छ।
साधारण तय अक्सन शेयर खुल्ने बित्तिकै आवेदन दिनु भन्दा पनि बन्द हुने अन्तिम अन्तिम दिन तिर आवेदन दिने। यसो गर्नाले चलेको बजार मूल्य संग तुलना गरेर हामीले उचित मूल्य बिड गर्न सक्छौं।
यदि आधारभूत रुपमा र प्राविधिक रुपमा कम्पनी बलियो देखियो भने न्युनतम मूल्य भन्दा माथि बजार मूल्यको 10% देखि 15 % घटाएर बोलकबोल गर्न सकिन्छ। यदि कम्पनी त्यति बिलियो लागेन तै पनि शेयर किन्न मन लाग्यो भने तोकिएको न्युनतम मूल्य भन्दा धेरै माथि बोलकबोल गर्नु हुदैन।
यदि पछिल्लो समय कम्पनीको शेयर मूल्य लगातार तल तिर आइरहेको छ र कम्पनीको प्रगति विवरण राम्रो आइरहेको छैन भने अक्सन शेयर सकेसम्म नकिन्ने। किनभने यस्ता कम्पनीले नाफा दिन सक्दैन। तर लामो समयको लागि लगानी गर्ने हो भने त्यै अनुसार रणनीति बनाउन सकिन्छ।
अक्सन शेयर किन्नुको फाइदाहरु
सिधै बिक्रेता कम्पनीसंगै किन बेच्न हुने भएकोले सेबोन शुल्क, डिपी शुल्क, ब्रोकर शुल्क आदि तिर्नु पर्दैन।
बजार मूल्य भन्दा कम मूल्यमा शेयर किन्न पाईन्छ।
धेरै मात्रामा (बल्कमा) शेयर किन्न पाईन्छ।
राम्रो संग अध्यान गरेर किनियो भने छोटो समयमा धेरै लाभ लिन सकिन्छ।
यदि शेयर परेन भने तुरुन्तै शेयर बराबरको पैसा फिर्ता आउँछ।
मेरो शेयर वा अन्य अनलाईन माध्यमबाट शेयर किन्न मिल्दैन।
शेयर आवेदन फारमको छुट्टै 100 तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
राम्रो संग अध्यान गरेर शेयर किनिएन भने घाटा पनि लाग्न सक्छ।
अक्सन शेयर नेप्सेमा सुचिकृत हुन् समय लाग्छ।
कुनै कुनै कम्पनीको कम्तिमा 100 कित्ता शेयर किन्नै पर्ने र न्युनतम मूल्य अगाडि नै तोकिएको हुनाले नयाँ लगानीकर्ताहरुले किन्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ।
अक्सन शेयरमा लगानी गर्न शेयर बजारको राम्रो ज्ञान हुन आवश्यक देखिन्छ। नयाँ लगानीकर्ताले उच्च मूल्यमा लगानी गर्दा अक्सन शेयरबाट फाइदा लिन सक्दैनन् । त्यसैले शेयर बजारको सुक्ष्म विश्लेषण गर्नसक्ने व्यक्तिले मात्रै अक्सन शेयरमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
अहिले कुन कुन कम्पनीको शेयर अक्सनमा छ ?
अहिले कुन कुन शेयर लिलामीमा छ भन्ने कुरा हामीले तलका वेवसाइटहरुबाट हेर्न सकिन्छ। साथै सम्बन्धित बिक्रि पप्रबन्धकको वेवसाइटमा समेत दिईएको हुन्छ।
अक्सन शेयरको नमुना आह्वानपत्र
नेप्सेले 80% लाभांश दिने ? कस्तो बोनस हो अनि कसले पाउने हो ?
रिपो र रिभर्स रिपो भनेको के हो ? कुन बेला राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्दछ ?
साम्लिङ् पावर कम्पनीले भदौ १८ गतेदेखि स्थानीयलाई आईपिओ जारी गर्ने
न्यादी हाइड्रोपावरको IPO लम्जुङको स्थानियलाई खुल्यो, क-कसले भर्न पाउने ?
जिवन विकास लघुवित्तको शेयर मूल्यमा लगातार सकारात्मक सर्किट, यस्तो छ कारण
© 2022 Share Gyan